Ny fatorana vy tsy misy fangarony dia ilaina indrindra ho an'ny fitetezana sambo azo antoka
Amin'ny sambo mandeha sambo, rehetra misy kojakoja feno, ka mety amin'ny fitetezana azo antoka. Ireo kojakojan-tsambo marobe an-tsambo, ao anatin'izany ny fatorana tariby vita amin'ny vy tsy misy fangarony, na dia kely sy kely fotsiny aza ny kojakoja misy azy dia ny fiarovana ny sambo no ampahany lehibe amin'ny dia. Maninona no lazaina ny maha-zava-dehibe ny ...
Inona avy ireo famaritana fatorana vy tsy misy fangarony? Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny kitapo plastika sy ny famafazana plastika?
1. miaraka amin'ny plastika plastika (PVC) tsy misy firakotra afo miaro amin'ny setroka afo setroka, fiarovana ny tontolo iainana 2.PVC coating hafanana na tontolo iainana fohy fiainana maina vetivety maina hoditra 3.unit ny vidiny dia ambony noho ny fantsom-pitaovana (misy) (1.5 ka hatramin'ny In-2 Plastika manaparitaka ny fanaintainan'ny mainty ...
Ampiasao sy fampiasana ny bokotra vy tsy misy vy
Vy vy, azo antsoina koa hoe fonosana vy tsy voafehy na vy tsy mifatotra vy, buckle ampiasaina hiara-miasa amin'ny vy vy fehin-kibo ny zavatra, miaraka amin'ny tanjaka avo, be mpampiasa, fametrahana dia tsotra miandry toetra, dia ampiharina be ao famantarana ny fifamoivoizana, communica ...
Fampiharana fantsona vy tsy misy fangarony
Ny fatorana tariby vy (dibbling) dia azo ampiasaina ao an-trano sy any ivelany. Raha ny toerana nampiasana azy dia azo fehezina mora foana izy io ary azo apetraka mora foana amin'ny tanana. Anti-antitra, anti-harafesina, taratra ultraviolet, tery. Famaritana feno. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fifandraisan-davitra, ...
Herinaratra Manana rindrambaiko isan-karazany amin'ny rafitra herinaratra sy herinaratra. Ny tombony azo dia aseho amin'ny: 1. Ny vokatra vita amin'ny kofehy tsy misy fangarony dia tsy voafehin'ny endrika sy ny haben'ny zavatra hamatotra azy; 2. Ny firafitry ny buckle tsotra dia manamora ny fahasarotan'ny nentin-drazana ...